ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Chronic venous insufficiency or CVI ဆိုတာ နာတာရှည် သွေးပြန်ကြောက သွေးမလုံလောက်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင် အောက်စီဂျင်မဝတာ ဖြစ်နေမယ်။ သွေးပြန်ကြောတွေ ပျက်စီးနေတာကို Impaired musculovenous pump ကြွက်သားသွေးမဝတာလို့ ခေါ်တယ်။ သွေးပြန်ကြောတွေထဲက...
.ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ရောဂါဖြစ်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးများကသူငယ်ပြန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးဆခွဲ ပိုမြင့်မား
ကိုထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ရောဂါဖြစ်သူ အမျိုးသမီးတွေက အသက်ကြီးချိန်မှာ သူငယ်ပြန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးဆခွဲပိုမြင့်မားတယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တာက အမျိုးသမီးရဲ့ဦးနှောက်ဆီ သွေးစီးဆင်းမှု လျော့ကျ တာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပုံမမှန်သွေးတိုးရာကဖြစ်တဲ့ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါကြောင့် ကိုယ် ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားတယ်လို့လည်း လေ့လာသူတွေက ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။...
– စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) စံတော်ချိန်ဇုန်မတူတဲ့ အရပ်ဒေသကို လေယာဉ်အကြာကြီးစီးပြီး ခရီးနှင်ရတဲ့အခါ Jet Lag လို့ ခေါ်တဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီဝေဒနာမရဘဲ လိုရာပန်းတိုင်ကို စိတ်ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်စွာရောက်ရှိနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက်တချို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ – ခရီးမသွားမီ တစ်ညလုံး...
မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းအခက်အခဲရှိနေသူတို့အတွက် . . .
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဇနီးမောင်နှံစုံတွဲ ခုနှစ်တွဲမှာ တစ်တွဲဟာ ကိုယ်ဝန်ရရှိဖို့အခက်အခဲ ပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစားအသောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အာဟာရဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလေးရဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆင်သင့်ဖြစ်စေသလို အမျိုးသားတွေရဲ့ သုက်ကောင်ကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။...
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲက နာ့ဗ်ဆဲလ်တချို့ထိခိုက်တာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဦးနှောက်နာ့ဗ်ဆဲလ်တွေက ဒိုပါမင်းလို့ခေါ်တဲ့ အရေးကြီးဓာတ်တစ်မျိုးကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒိုပါမင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းဆီကို အချက်ပြသင်္ကေတပေးပို့ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကြွက်သားတွေက...
ဘီပိုးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးက တစ်သက်လုံး သောက်ရမှာလား . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး – အသည်းရောင်ဘီပိုးကောင်ရေ ၅၅၀ရှိတာ ပိုးသတ်ဆေး ၆လ သောက်ခိုင်းပြီး ပြန်စစ်ခိုင်းတယ်။ မစစ်ဖြစ်သေးလို့ဆေးလည်း ၆လပြီး ဆက်မသောက်ဖြစ်ဘူး။ / milk thistleeJY livonlin forte တော့ ပုံမှန်သောက်နေတယ်။ သိချင်တာက...
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဖောလစ်အက်စစ် ပိုလိုအပ်နေကြောင်းပြသသည့် လက္ခဏာ ၇ ရပ်
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမေရိကန်ဆေးပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရအရွယ်ရောက်သူတွေက တစ်နေ့မှာ ဖောလစ်အက်စစ် ၄၀ဝ မိုက်ခရိုဂရမ်ကို မှီဝဲသင့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်က ဒီအင်န်အေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး သွေးနီဥထုတ်လုပ်မှုမှာ ကူညီပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဖောလိတ်ချို့တဲ့နေရင် သွေးအားနည်းရောဂါတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) တွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်စွမ်း...
အာလူး၏ ကျန်းမာရေး စွမ်းပကား
၊ ဇွန် ၊ အာလူးမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပါဝင်မှုများတာကြောင့် သင်စားမယ့်အစားအစာ စာရင်းကနေ အာလူးကို ထုတ်ထားပါသလား။ အာလူးကို ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာမှာစိုးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြောင့် လုံးဝမစားဘဲတော့ မနေသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အာလူးမှာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အများကြီး...
အခြိနျသီးသနျ့ပေးစရာ မလိုသော ကနျြးမာရေးအတှကျ အလှယျနညျးမြား
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက်ကသိုလျ) တဈနေ့ မိနဈ၃၀ လေ့ကငျြ့ခနျးလုပျ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ သဈသီးကို တဈနေ့ငါးကွိမျပွညျ့အောငျ စား၊ ခွလှေမျးတဈသောငျးပွညျ့အောငျ နေ့စဉျလမျးလြှောကျ.. ဆိုတဲ့ ကနျြးမာရေး ပညာပေးစကားတှကေို ကွားရဖနျမြားပမေယျ့လုပျဖွဈဖို့ မလှယျဘူးလား။ ဒီလိုတိတိကကြကြွီး မလိုကျနာနိုငျပမေယျ့ သှားလာလှုပျရှားရငျးနဲ့ပဲ ကနျြးမာရေးအတှကျအထောကျအပံ့ဖွဈနစေဖေို့...
သင့်ခြေထောက်ကို တစ်နေ့ မိနစ် ၂၀ မြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် သင်ပြန်လည်ရရှိမည့် ကောင်းကျိုးများ
ကျွန်မတို့တတွေက နေ့စဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်များများမပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်တတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ မိနစ် ၂၀လောက် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးရုံနဲ့ မောပန်းမှုကင်းပြီး စိတ်ခံစားမှုကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်ကို မှန်ကန်စွာမြှင့်ပါ – နံရံတစ်ခုနားမှာ သက်သောင့်သက်သာ အနေအထားနဲ့လှဲနေပါ။ ပက်လက်လှန်ပြီး ခေါင်းအုံးတစ်ခုပေါ်...